Grey Microfiber Leather Kugadzikana Kwetsika Leather Seat Upholstery
Izita rakazara re microfiber yeganda "microfiber yakasimbiswa dehwe". Icho chiri cheganda richangobva kugadzirwa mumatehwe ekugadzira. Izvo ndezverudzi rutsva rweganda. Ine abrasion kuramba, kutonhora kuramba, kufema, kukwegura kuramba, uye zvakapfava magadzirirwo. Kudzivirirwa kwezvakatipoteredza uye kutaridzika kwakanaka, ndiyo sarudzo yakanakisa kutsiva ganda rechisikigo (yekutanga danga remombe), zvino mabhizinesi mazhinji achatengesa microfiber dehwe seyekutanga mombe yemombe pamitengo yakakwira.
Premium Mota Beige Microfiber Iyo Inonzwa Senge Leather
Microfiber PU dehwe, tichishandisa nylon yepasi uye polyurethane yepamusoro dhayeti, ndeyemhando yepamusoro yekupedzisira yeganda, isu tinopa anopfuura makumi maviri marudzi emarudzi evatengi kuti vasarudze.
Abrasion Resistant Nyowani Napa Microfiber Vegan Mota Leather yeCar Seat
Mota microfiber dehwe rakakwirira kune echisikigo dehwe maererano neukobvu rakafanana, kubvarura simba, kupenya kwemavara uye pamusoro mashandisiro, iro rave iro rekutungamira nongedzo yemazuva ano synthetic dehwe pamwe nekuita kwayo kwakanaka, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, isiri-chepfu, yakanyanya kushandiswa chiyero.
Yakakwira Mhando Auto Auto Microfiber Leather neCompetitive Mutengo
Bensen's microfiber yeganda ine yakanyanya abrasion kuramba, nyaradzo uye tensile simba. Sezvo Bentham ine fekitori yayo, inokwanisa kupa yakakwikwidza mitengo uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Abrasion nemishonga Toughest akaiswa mushonga wokuuraya Microfiber PU Leather
Microfiber chakaita zvokugadzirwa nedehwe ane zvakasiyana ukobvu uye zviyo, izvo zvinogona kusangana kushongedzwa dzakasiyana munzvimbo mukati motokari, uye microfiber PU nedehwe rinosangana zvinodiwa girini upenyu.